Hety ambongadiny amidy ambongadiny miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy vita amin'ny tànana voasokitra | Icool
Modely ： IC-60-4 ； IC-6030T-4
● Ny hety ICOOL dia manohy asa-tanana ary manatsara hatrany. Voalamina tanana, noforonina tsara ny hety tsirairay. Ny hety tsirairay dia notsapaina tamin'ny hamafiny, ary hiditra amin'ny dingana manaraka aorian'ny fahaizan'ny test. Hamarino tsara fa tsy mandeha ny hety eny an-tanan'ny mpanjifa.
● Ity hety amin'ny hety matihanina ity dia misy hety mahitsy 6.0 santimetatra ary hety miisa 6, hety 30 manify. Ny hety manety mpanety matihanina dia vita amin'ny vy tsy miova 440c, mamorona hety avo lenta, mateza ary maranitra. Omeo traikefa fanapahana volo avo lenta ianao.
● Ny fisehoan'ny hety dia tsotra sy kanto, kanto ary tsara tarehy. Ny ambonin'ilay ravina hety dia nohosorana ary nifanaraka tamin'ny tahony vita sokitra lamina, izay fahafinaretana hita maso sy mailaka.
● Ny hety sy ny fanapahana mahitsy dia mety amin'ny famitana volo, famoronana loha Sassoon, loha Bobo ary famaranana volo vehivavy hafa. Izy io koa dia mety amin'ny famoahana ny bangs sy ny firafitry ny contour.
● Ny hety nify dia mety amin'ny volo manify an'ny olona be volo. Tsy hisintona ny volony amin'ny lafiny rehetra izy rehefa manapaka ny volony, ary ny fanapahana ny tampony dia tsy misy dian-tongotra sy malefaka.
Hety volo napetraka miaraka amin'ny tahony vita sokitra
Teo aloha: VG10 Gunting volom-borona tsy miova firy
Manaraka: 6.0 Napetraka Gunting ho an'ny volo taovolo matihanina